Imnwetacha uru data bara uru site na iji Pepperdata's Big Data Stack Optimization na akpaghị aka | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 17, 2020 Tọzdee, Septemba 17, 2020 Ash Munshi
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ n'ụzọ ziri ezi, nnukwu data nwere ike imeju arụmọrụ. Nnukwu data na-arụ ọrụ dị mkpa ugbu a na ihe niile site na ụlọ akụ na nlekọta ahụike na gọọmentị. Na amụma na-ebuwanye ibu banyere ahịa ahịa data zuru ụwa ọnụ, site na $ 138.9 ijeri na 2020 na $ 229.4 ijeri site na 2025, bụ ihe doro anya na-egosi na nnukwu data bụzi ihe na-adịgide adịgide na mpaghara azụmahịa.
Agbanyeghị, iji nweta uru kachasị na nnukwu data gị, ọ dị mkpa ka ị na-ege ntị na mkpokọta data gị mgbe niile ma rụọ ọrụ nke ọma, ma n'igwe ojii ma ọ bụ na ogige. Nke a bụ ebe Pepperdata na-abata. Pepperdata na-enye òtù dị iche iche na akpaghị aka nnukwu data akụrụngwa njikarịcha. Ikpo okwu a na-ewepụta nlele anya na-enweghị atụ na akpaka na-akpaghị aka iji hụ na nnukwu akụrụngwa data gị, ngwa ọdịnala, yana usoro na-aga nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma, na-eme ka ọkwa ọkwa SLA dị maka ngwa ọ bụla ma na-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ.
Ikwado nnukwu data nke ọma na-achọ ka a na-ahụ ya ma na-aga n'ihu. Nke a siri ike na-enweghị ezigbo ngwaọrụ. Pepperdata na-enye ngwongwo ngwongwo zuru oke, site na ụlọ anyị na ngwaahịa na igwe ojii: Platform Spotlight, Optimizer Capacity Optim, Query Chakwasa ihie, Gụgharia Spotlight, na Ihe ntanetị.
Pepperdata Platform Chakwasa ihie
Pepperdata Platform Chakwasa ihie na-emeso gị ihe nlele ogo 360 nke nnukwu akụrụngwa data gị. See na-ahụ ihe niile, gụnyere otu esi eji akụ, akụkọ ihe mere eme na ezigbo oge nke ụyọkọ gị, yana ngwa ndị na-agba ọsọ na ọkwa kachasị mma yana ngwa ndị na-emebi ihe.
Get nweta nkọwa zuru ezu nke na-egosipụta nkọwa dị mkpa nke ụyọkọ gị niile. Na mgbe ikwesiri ka emee nke ọma, ịnwere ike ịkụ ala ma gwuo ala iji nyochaa ngwa data ọ bụla buru ibu iji ghọta arụmọrụ ya na nchịkọta nke ụyọkọ ahụ. Mgbe obula nsogbu okwu gi putara, ihe ngosi nke Platform na - enye gi nsogbu iji mezue ngwa ngwa.
Dabere na arụmọrụ oge arụmọrụ, Platform Chakwasa ihie ga-emepụta ezigbo nhazi iji kwado akpa, ahịrị, na akụ ndị ọzọ, na-ekwenye na arụmọrụ dị mma na enweghị ntụpọ mgbe ị na-eri ezigbo ego. Ọ na-elekwa anya na arụmọrụ arụmọrụ iji chọpụta usoro uto ma kọwaa amụma akụ ga-eme n'ọdịnihu maka ngwa, arụ ọrụ, na usoro.
Pepperdata ikike Optimizer
Njikwa ntuziaka nke nnukwu nchịkọta data abụghịzi nhọrọ bara uru na ụwa asọmpi taa. Ọsọ bụ ihe kachasị mkpa ma a bịa n'iji ma mee ka nnukwu data gị dịkwuo elu. Pepperdata ikike Optimizer na-anọgide na-akụ ma na-ebuli nnukwu akụ ụyọkọ data gị na mgbanwe nhazi ngwa ngwa na nke ziri ezi, na-eme ka ihe dị ukwuu 50% ụyọkọ data ụyọkọ na ikike iweghachi ihe ndị ọzọ.
Pepperdata ikike Optimizer na-anapụta jikwaa autoscaling maka workloads na-agba ọsọ na ígwé ojii. Ot-auto-ịkpụzi na-enye ụfọdụ elasticity ahịa mkpa maka ha nnukwu data workloads. Otú ọ dị, ezughị. Pepperdata ikike Optimizer ji ọgụgụ isi na-amụba autoscaling iji hụ na a na-ejikarị ọnụ eme ihe niile tupu emee ọnụ ndị ọzọ, na-egbochi mkpofu ọzọ mgbe ị na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ.
Ndị na-enye igwe ojii na-eweta akụrụngwa dabere na mkpa dị elu nke oke ọrụ. A na-emezu ihe ndị kachasị mkpa, mana inyefe ego na-ebute ọtụtụ ihe mkpofu ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ akụrụngwa. Ike Optimizer nwere ike ịme ọtụtụ puku mkpebi kwa nke abụọ, na-eme nyocha nke oge maka ojiji ojiji iji bulite ọrụ nke CPU, ebe nchekwa na m / O na nnukwu ụyọkọ data. Nsonaazụ zuru oke bụ na ịkachasị ihe ntanetị na-ekpochapụ ma kpochapụ mkpofu.
Pepperdata Ajụjụ Chakwasa ihie
Ajuju di nkpa di nkpa mgbe ị na-ekwu okwu na onodu nnukwu data. Ajuju choro ma weghachite data iji nyere aka mee oru na usoro na ngwa ike. Ajuju ajuju achoputaghi nwere ike ime ka oru na ngwa ghara. Pepperdata Ajụjụ Chakwasa ihie na-enyere ndị ọrụ aka ịbanye n’ime nyocha ọ bụla ma nweta ozi nghọta na mbibi ya na arụmọrụ nke nchekwa data ahụ.
Pepperdata Query Chakwasa ihie na-enyere gị aka imezi, debug, ma bulie ajụjụ ọrụ, gụnyere Hive, Impala, na Spark SQL. Site n’ajụjụ ịrụ ọrụ ha ọsọ ọsọ, ọnụahịa na-ebelata oke, ma ọ bụ n’igwe ojii ma ọ bụ n’elu ụlọ.
Ajụjụ Chakwasa ihie na-enye ndị mmepe ohere ilebanye anya na nyocha ịjụ ajụjụ yana ogbugbu ozi ha, chọpụta ngwa ngwa nsogbu atụmatụ ajuju, nyocha nyocha arụmọrụ, igosipụta nsogbu na nsogbu na-enye aka na nwayọ ajuju, yana ọsọ ọsọ iji dozie. Na ngwa ọrụ a, ndị na - arụ ọrụ nwere ike belata ajụjụ na - enye nsogbu ozugbo, ọbụlagodi na gburugburu ọtụtụ ndị ọrụ. Site na nyocha ihe ịmara, ha nwere ike ịkwalite ụyọkọ akụ ma bulie arụmọrụ.
Pepperdata gụgharia Chakwasa ihie
Pepperdata gụgharia Chakwasa ihie na-enye arụmọrụ IT na ndị nrụpụta otu dashboard jikọtara ọnụ na nkọwa zuru ezu iji lelee usoro ụyọkọ Kafka ha na visibiliti oge dị adị. Ihe ngwọta ahụ na-enyere ha aka ịkwado ahụ ike, isiokwu, na nkebi.
Nke a bụ ngwa ọrụ magburu onwe ya ebe ọ bụ na data telemetry nke Kafka rụpụtara buru ibu ma ọ naghị adị mfe ịnweta, ọkachasị n'ụyọkọ ụyọkọ mmepụta. Imirikiti nke Kafka arụmọrụ nlekota oru ngwọta na-anapụta ndị a chọrọ-metrik, visibiliti, na nghọta na-agba ọsọ gụgharia ngwa ka ndị kasị elu larịị nke arụmọrụ.
Gụgharia Chakwasa ihie si ike Kafka arụmọrụ nlekota na-enye ohere ọrụ hazi Kafka arụmọrụ metrics na-eme ka alerts maka atypical Kafka omume na ihe omume. Ihe ngosi a na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe iji nlezianya nyochaa ma chọpụta nrugharị na akụrụngwa IT na-atụghị anya ya.
Pepperdata Ngwa Chakwasa ihie
Pepperdata Ngwa Chakwasa ihie anapụta a zuru ezu, n'ụzọ zuru ezu zuru ezu na foto gị niile na otu, n'otu ebe. Site na ngwọta a, ị nyochaa arụmọrụ nke ngwa ọ bụla ma chọpụta nsogbu 90% ọsọ ọsọ, na-ebute mkpebi ngwa ngwa na arụmọrụ zuru oke kacha mma.
Pepperdata na-enyekwa ndụmọdụ gbasara ọrụ maka ngwa ọ bụla ma na-enye gị ohere ịtọlite ​​ọkwa nke na-arụ ọrụ site na omume na nsonaazụ ụfọdụ, na-egbochi oke egwu ọ bụla nke ọdịda. Pepperdata Ngwa Chakwasa ihie na-enyere gị aka imeta ezigbo arụmọrụ arụmọrụ na multi-tenant usoro, n'agbanyeghị ebe ị na-agba ọsọ gị workloads (ie, na-ogige, AWS, Azure, ma ọ bụ Google Cloud).
The Pepperdata Big Data njikarịcha Uru
Ihe ngwọta akpaaka nke Pepperdata enyerela ndị isi aka n'ofe ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere ụlọ ọrụ Fortune 500, iji bulie ma bulie arụmọrụ nke nnukwu data data ha. Na Pepperdata, ụlọ ọrụ buru ibu na obere na-enwe oke nchekwa na nnukwu ihe eji arụ ọrụ data, belata MTTR (Oge Pụrụ Idozi), na ịrụ ọrụ arụmọrụ na ntinye.
Pepperdata nyeere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke Fortune 100 aka chekwaa $ 3.6 nden na nchekwa akụrụngwa ka ị na-enye ọhụhụ granular n'ime ihe ngosipụta ụyọkọ, usoro ọrụ, na arụpụtaghị ihe.
Lọ ọrụ na-ere ahịa nke Fortune 100 kwalitere arụmọrụ nke nnukwu ụlọ data ya na Pepperdata. A 30% na-abawanye na throughput nyeere ụlọ ọrụ ahụ aka ịme ọtụtụ ngwa na ibu ọrụ, belata MTTR site na 92%, wee nweta ego $ 10 nde na mmefu akụrụngwa.
Otu ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa kwadoro ka nnweta 24/7 dị nke ngwa nchekwa ndụ ya site na iji ikike ikike Pepperdata na ihe ngwọta kachasị. Ngwa ndị dị oke mkpa na-atọ ụtọ oge akụrụngwa yana ịdọ aka na ntị oge ma ọ bụrụ na e mechie ụzọ mbata, na-egbochi ọdịda.
Mee ka Uru Nnukwu data Gị dị ugbu a
Nnukwu data bụ ọdịnihu na ụlọ ọrụ ọ bụla na-agagharị na ya. Ma uto a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu. Ikwesiri imeghe ike na uru nke nnukwu data gị ma ọ bụrụ na nzukọ gị ga-adị ndụ ma nwee ume, karịsịa n'oge ndị a siri ike.
Ka ọtụtụ ngwa ngwa data dị mgbagwoju anya na-akwaga n'igwe ojii, ọ ga-akacha mma ka ị ghara ịkekọrịta ihe onwunwe. Naanị n'afọ 2019, ihe ọghọm ruru ijeri $ 14. Ka akụnụba ụwa niile na-amalite ịgbake site na ọrịa a, ndị otu dị mkpa ịkwalite nnukwu egwuregwu ha dị ka onye ọ bụla ọzọ na-agba mbọ iji kwado ọnọdụ ha na ụlọ ọrụ ha.
Ndị ụlọ ọrụ ga-eburu n'uche na ego ga-eto naanị ma ọ bụrụ na ha ebughi nke ọma. Azụmaahịa aghaghi ịgbalịsi ike ị nweta usoro iji mụta ihe igwe nke nwere ike ịkọwapụta ngwa ngwa nke ụyọkọ a na-ala n'iyi ohere ma ọ bụ akụnụba, ebe ị na-ekwu okwu banyere mgbanwe mgbanwe akụ chọrọ.
Kpọtụrụ Pepperdata ịhụ otú nnukwu data njikarịcha anyị nwere ike isi bulie azụmahịa gị n'ọkwa ọhụrụ.
Banye maka a Free Pepperdata Trial
Tags: akpaghị aka n'iji yaawsnnukwu datannukwu data akpaghị aka n'iji ya gee ntịnnukwu akpaaka datannukwu njikarịcha datannukwu nchịkọta datannukwu nchịkọta dataakụrụngwa dataigwe ojii googlekafkapụtara oge ịrụziMttrosedataPepperdata Ngwa Chakwasa ihiePepperdata ikike OptimizerPepperdata Platform Chakwasa ihiePepperdata Ajụjụ Chakwasa ihiePepperdata gụgharia Chakwasa ihie
Tupu ya abanye na Pepperdata, Ash bụ onye isi oche maka Marianas Labs, mmalite mmụta miri emi nke e rere na Disemba 2015. Tupu nke ahụ, ọ bụ onye isi maka Graphite Systems, nnukwu mbido data nchekwa nke e rere EMC DSSD na August 2015. Ash na-ejekwa ozi dị ka CTO nke Yahoo, dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe, ọ dịkwa na mbido ọtụtụ teknụzụ mmalite. Ash gara Mahadum Harvard, Mahadum Brown, na Mahadum Stanford.
Kwụsị imelite afọ na azụmahịa na saịtị WordPress gị na Shortcode a